TextMate 2 dia rindrambaiko maimaimpoana izao! | Avy amin'ny Linux
TextMate 2, iray amin'ireo tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra sy kaody tsara indrindra ho an'ny OS X dia nanapa-kevitra ny handeha loharano misokatra miaraka amin'i a Fahazoan-dàlana GPL 3. Ny mpamorona azy, programmer Allan Odgaard, dia nanapa-kevitra fa ny fomba tsara indrindra mandroso amin'ny fampandrosoana ity rindrambaiko ity dia ny manokatra azy io ka mpampiasa MEY manome ny anjara birikinao.
Allan Odgaard, fantatra amin'ny anarana hoe MacroMates, dia nanambara omaly fa ny kaody ho an'ny TextMate 2.0 dia azo alaina amin'ny alàlan'ny tahiry GitHub. Navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GPL 3 io kaody io mba hanoherana izay hitan'ny mpamorona sasany ho famerana ny fahalalahana eo amin'ny sehatra Mac.
TextMate dia mpamoaka lahatsoratra malaza be ho an'ny Mac OS X, noforonin'i Allan Odgaard. Nanjary nalaza ho fitaovana fampandrosoana izy io noho ny endriny sy ny endriny. Mora azo ovaina izy io ary matetika ny mpampiasa dia mandefa ny fanaingoany. Niavaka tamin'ny Apple Design Award tamin'ny 2006 (andiany 1.5), ny kinova farany azo antoka tamin'ny fampiharana dia nanomboka tamin'ny 2010, ary tamin'ny Desambra 2011 dia nisy alfa ho an'ny daholobe an'ny TextMate 2.0 navoaka.
MacroMates dia nisafidy ny fahazoan-dàlana GPL 3 hisorohana ny fork loharano mihidy. Odgaard dia mahafantatra fa ny fahazoan-dàlana tsy dia voafetra dia ilaina amin'ny faritra sasany amin'ny kaody ary handinika ny famerenana ny lisansa ho an'ny sasany manokana.
… Fotoana iray anaovan'ny mpamatsy sehatra antsika fepetra hamerana ny fahafahantsika, ity no fanandramako kely hanoherana io fironana io.
Ny fandraisana andraikitra hamoaka ny kaody ho an'ny TextMate 2.0 dia toa valiny amin'ny fitomboan'ny fanaraha-maso ny fiarovana ao amin'ny OS X Mountain Lion, izay mametra ny fahafahan'ny fampiharana aparitaka amin'ny alàlan'ny Mac App Store.
Sintomy ny TextMate 2
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » TextMate 2 dia rindrambaiko maimaimpoana izao!
Karlisle Aavli dia hoy izy:
Valiny tamin'i Karlisle Aavlí
Perry dia hoy izy:
Andao jerena hoe iza ilay lehilahy sahy mahavita manangona / manao seranana ho an'ny Linux miaraka amin'ireo teknolojia mahazatra sy mahazatra ampiasain'ny xD
Mamaly an'i Perry
Tsara, avy eo tongasoa eto amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana, heveriko fa tsy dia sarotra loatra ny mandefa na manangona ity app ity amin'ny Linux! Andao hiandrasana raha misy dikanteny ho an'ny Linux navoaka amin'ny ho avy, etsy andaniny heveriko fa fanapahan-kevitra tena tsara noraisin'ny mpamorona izany, ary ankehitriny ny vondron'olona mpampiasa dia afaka mandray anjara mavitrika kokoa amin'ny fampiharana.
byroncorrales dia hoy izy:
Tsy misy kinova mpiara-mianatra ho an'ny linux. … Tokony ho diso ianao
Mamaly an'i byroncorrales
Marina ny anao, nifangaro tamin'ny Sublime 2 aho, azafady.
Efa ela aho no nampiasa azy io tao Ubuntu